Xumbo toogte 3 Ciyaarta Xayiran | Ciyaar Bilaash ah 2021 Xumbo toogte, Featured games!
Hoyga / Xumbo toogte, Featured / Xumbo toogte 3
Xumbo toogte 3
bubble shooter bubbleshooter gamedistribution html5 mobilka
Xumbo toogte 3 waa nooca la cusbooneysiiyay ee ciyaarta caanka ah ee biibiilaha bilaashka ah. Waxaa lagu ciyaari karaa gebi ahaanba bilaash ah qaabka shaashadda oo buuxa oo aan lahayn soo dejin iyo diiwaangelin!
Ciyaartan quruxda badan ee biqilku wuxuu ku bilaabmayaa saddex midab oo kala duwan. Waa inaad toogataa sida ugu saxsan ee suurtogalka ah si aad ugu ciyaarto midabada oo dhan. Markaad ku ciyaareyso garoon maran, waxaad u gudubtaa heerka ku xiga. Markasta oo aad hesho, way ka sii dhib badan tahay: Waxaad helaysaa midabbo badan oo aad wax ku toogato, kubbado badanina garoonka ayay soo galaan. Kulankaan wuxuu damaanad qaadayaa saacado xiiso leh heerar kala duwan oo badan. Dadaal samee!
Xumbo toogte 3 shaqeeyaa asal ahaan sida ciyaarta asalka ah, laakiin waxay bixisaa qolof ah fursado cusub. Marka ugu horeysa waxa loo qaybiyaa heerar shaqsi, mid kasta oo ay tahay inaad kaligaa xalliso. Si tan loo sameeyo, waxaad mar labaad xariiq ka dhiseysaa xumbada, sidaa darteed 3 ama xumbo badan oo isku midab ah ayaa isku dhinac yaal. Kuwani markaa way kala baxeen oo wadada way baneeyeen. Haddii aad hesho dhammaan goobooyin, waxaad helaysaa gunno oo waxaad ku dambeyn doontaa heerka xiga.
In Xumbo toogte 3 waa inaad xoogaa fiiro gaar ah siisaa sida aad goobooyinka u qarxinayaan. Ficil ahaan wax waliba waxay ku xisaabtamayaan dhibcaha halkanna waxaad ku kasban kartaa kala duwanaansho weyn. Xumbooyin badan oo isku midab ah ayaa isla sudhan, dhibcaha sare. Isla markaana, goobooyinku hoos u soo dhacaan sababo la xiriira isku xigta la soo riday ayaa ku siineysa dhibco badan oo dheeri ah. Si loo muujiyo tan, hadaad qiyaasto inay jirto xumbo cagaaran oo sudhan 3 goobooyin casaan ah oo waad toogan kartaa kuwa cas si cagaar sidoo kale loo garaaco, mar hore ayay bixisaa 30 Dhibco.
In ciyaarta laga dhigo mid aan fududeyn, kasta 4 heerarku waxay leeyihiin midab cusub, si markaa mar uun ficil ahaan qof walba u gaadho xuduuddiisa. Iyada oo heer kasta Xumbo toogte 3 wuu kugu sii adkaanayaa oo si dhib leh ayaad ku qaban kartaa silsilado dhaadheer.
Tilmaam yar oo ah dhibco dheeri ah oo ku jira Xumbo-toogte 3 sidoo kale waa la heli karaa. Haddii aad ku dhowdahay inaad dhammayso heer, waa inaad midabka ugu dambeeya dhawr jeer dhinac dhigtaa. Sidan oo kale garoonka ayaa buuxin doona xumbo waxaadna helaysaa dhibco badan oo dheeri ah adigoon lumin.
Review of Xumbo toogte 3
Ciyaartu si fiican ayey u ciyaareysaa oo xoogaa way ka dheereysaa qayb ahaan 2, sawirada sidoo kale waa cusub yihiin - sidaas oo dhan dhammaan taxane weyn! Xumbo toogte 3 damaanad qaadaya saacado madadaalo leh heerar kala duwan oo badan. Sii tallaalkaaga ugu fiican! Iskuday inaad gaarto heerka ugu sarreeya oo baashaal intaad ciyaareyso cayaartan xumbada qabow!
[Wadarta: 88 Celcelis: 4.3/5]